Modernized Oriental Technique of Accurate Astrology (MOTAA): MOTAA Lessons (မိုးတား နက္ခတ်သင်ခန်းစာများ)
MOTAA အခမဲ့ သင်တန်း တက်ရောက်ရန် လိုအပ်ချက်။
MOTAA ဝေဒ စနစ် အနေဖြင့် MOTAA အသင်းသား အဖြစ် စာရင်းသွင်းထားပြီး- MOTAA အုပ်ချုပ်မှု ကော်မီတီမှ အသင်းသား အဖြစ် လက်ခံထားသူ မည်သူကို မဆို- MOTAA အခမဲ့ သင်ခန်းစာများ ပို.ချပေးပါမည်။
MOTAA သည် တစ်ဦးကောင်း၊ တစ်ယောက် ကောင်း၊ တစ်နည်းကောင်း ကိုသာ၊ ဦးစား ပေး၍ အခြား သော ပညာများကို လျစ်လျှူ ပြုသော စံနစ်မျိုးမဟုတ်။
စစ်မှန်သော ဝေဒ ပညာရပ်ကို မြန်မာ အမျိုးသား တို.အကြားတွင် ပြန်လည် ထင်ရှား လာအောင် ဖေါ်ထုတ်ပေး သော၊ သိပ္ပံနည်း ကျကျ စိစစ် သော နည်းစနစ် ဖြစ်သဖြင့် သုတေ သန ကို အထူးပြုသော ပညာရပ် ဖြစ်သည်။ သိပ္ပံပညာသည် မျိုးဆက် တစ်ဆင့်မှ တစ်ဆင့်သို. လက်ဆင့်ကမ်း၍ တစ်ဆင့် ခြင်း တိုးတက် လာခဲ့သည့် နည်းတူ- MOTAA ဝေဒ စနစ် ၏ နောက် နောင် မျိုးဆက်သစ် တို.သည် ပို၍- ပို၍ တိုးတက် ထူးချွန် အောင်မြင် လာစေ ရန်သာ ရည်ရွယ် ထားသည်။
တစ်ချိန်က မြန်မာပြည်တွင် - ထူးခြားသော ပညာရှင်ကြီးများ ပေါ်ပေါက်ခဲ့ သော်လည်း- ထိုပညာရှင် ကြီးများ၏ ပါရမီ၊ ဥာဏ်၊ ပညာ ကို လိုက်မီရန် ခဲယဉ်းခဲ့သဖြင့် နက္ခတ္ထ ပညာသည် ခက်ခဲ လှသည် ဆိုကာ- အများစု အနေဖြင့် လေ့လာရန် တွန်.ဆုတ် ခဲ့ရသည်။
ယခု MOTAA စနစ် သည် ခေတ်ပညာ တတ် လူငယ်များ၊ နက္ခတ္ထ ဝေဒ ပညာဖြင့် အသက် မွေးဝမ်း ကျောင်း ပြုနေသူများ၊ ၀ါသနာရှင် များအားလုံးကို -ခေတ်နှင့် လျှော်ညီ အောင် ရှင်းလင်း တင်ပြမှု များနှင့် တွဲဘက်၍- ဝေဒ သိပ္ပံ ပညာရပ် ကို တစ်ဦးမှ တစ်ဦးသို. လက်ဆင့်ကမ်း ပေးနိုင်ရန် ရည်ရွယ် ထားသော ပညာရပ် ဖြစ်သည်။
သို.သော်လည်း- ထိုသို.သော ပညာရပ်ကို လေ့လာရာတွင်- လေ့လာသူ၊ ဟောကြားသူ၊ ပညာရှင် တစ်ဦး တွင် လိုအပ်သော၊ စောင့်စည်း အပ်သော အချက်များကို လိုက်နာ ကြရန် လိုအပ် ပါသည်။
ရှေးယခင်က ကျမ်းစာ များအရ- နက္ခတ္ထ ဝေဒ ပညာရှင် တို.တွင် လိုအပ်သော အရည် အချင်း တို.ကို အောက်တွင် ဖေါ်ပြထားပါသည်။
ဗြို.ဟဇ် သံဟိတ ကျမ်း- ၀ရဟိမိရ ဆရာ ရသေ့ အနေဖြင့် ဗေဒင် ပညာရှင် တစ်ဦး အနေဖြင့် လိုအပ်သော အရည်အချင်းတို.ကို အောက်ပါ အတိုင်း ရေးသားထားပါသည်။
“နက္ခတ် ဝေဒပညာ တစ်ဦးသည်-
- စိတ်ဓါတ် ဖြူစင် သန်.ရှင်း ရမည်။
- ပညာ ကျွမ်းကျင်ရမည်။
- ရဲရင့် ရမည်၊
- နှုတ်မှု ရေးရာ တင့်တယ် ရမည်။
- လူစုလူဝေးကို မတွန်.ဆုတ်ရ။
- အခြား ဝေဒ ပညာ ရှင်များ နှင့် အခြေအတင် ဆွေးနွေးနိုင်စွမ်းရှိရမည်။
- အဂတိ တရားတို.မှ ကင်းလွတ်ရမည်။
- အဆိုးတရား တို.မှ ကာကွယ်ပေးနိုင်သော အစီအရင်၊ ပြုပြင်ပေးနိုင်သော အစီအရင် တို.ကို တတ်မြောက် ရမည်။
- နတ်ဒေ၀တာ တို.အား ပူဇော်ခြင်း ကိစ္စတွင် ပါဝင်ရမည်။
- ချိုးခြံ ခြွေတာ စွာကျင့်ကြံရမည်။
- ခေတ်နှင့် လျော်ညီသော ဗဟုသုတ တို. ပြည့်စုံရမည်။
- ပညာရပ် နှင့် ပါတ်သက်သော မေးခွန်းတို.ကို ဖြေဆို နိုင်ရမည်။
- ယတြာ ပညာကို တတ်ကျွမ်းရမည်။”
အိန္ဒိယမှ ဆရာကြီး ဘီ-ဗွီ ရာမာန် ဘာသာ ပြန်ဆိုသော - ပရာသျှန မာဃကျမ်းတွင်လည်း နက္ခတ္ထ ဝေဒ ပညာရှင် တစ်ယောက်တွင် ရှိသင့်သော အရည်အချင်း တို.ကို အောက်ပါ အတိုင်း ဖေါ်ပြထားသည်။
- ဝေဒ အတတ်ကို တတ်ကျွမ်းသူ အကြင် ပညာရှင်သည်- ဘာသာရေးသို. ဦးတည်သော ဤသင်္ချာပညာကို သိမြင်ခြင်း ရှိ၍၊ ယုံကြည်ခြင်း ခံထိုက်သောသူ၊ မသမာခြင်း မှ ကင်းလွတ် လျှက်၊ ဝေဒ အတတ်၊ မန္တရ၊ တန္တရ အတတ်၊ တို.ကို ကောင်းစွာ ကျွမ်းကျင် ပါလျှင် - အကြင်သူအား သုခမိန် ဟုခေါ်ထိုက်သည်။
- ထိုသူ ဟောပြော သော ဟောကြားချက်တို.သည် အမှန်သာ ဖြစ်လျှက်- ဘယ်အခါ တွင်မှ မှားယွင်း မည်မဟုတ်။
- ဂြိုဟ်တို.သွားလာ လည်ပတ်ခြင်း၏ အမျိုးအစား ၁၀-မျိုးကို လေ့လာ တတ်မြောက် ပြီးလျှက်၊ ဝေဒ ပညာ၏ အတွင်း သဘောကို ကောင်းစွာ နားလည် သူသည် အမှား မရှိနိုင်။
- အကြင် သူသည် ဟောရ မျိုးစုံတို.ကို နှံ.စပ် သိမြင်လျှက်- သိဒ္ဓန္တ၅-မျိုးကို ကျွမ်းကျင် ၍ ဆက်စပ် ဆွဲထုတ်ပြနိုင်သော အရည်အချင်း ရှိပြီး၊ မြင့်မြတ်သော ဆရာသခင်၏ လျှို.၀ှက် မန္တန်ကို တတ်မြောက်သူသည် ဇာတာကို ကောင်းစွာ သိရှိသူ ဖြစ်သည်။
ထို.ကြောင့် နက္ခတ္ထ ဝေဒပညာ ကို လိုက်စားသော မိုးတား MOTAAအသင်း ၀င် တစ်ဦး အနေဖြင့် အောက်ပါ စည်းကမ်းတို.ကို လိုက်နာရန် လိုအပ်သည်။
MOTAA အသင်းဝင်တစ်ဦး၏ စောင့်ထိန်းရမည့် အချက်များ။
(၁) MOTAA အသင်း ၀င် တစ်ဦးသည်- MOTAA နက္ခတ္ထ ပညာကို လေ့လာပြီးနောက်- MOTAA အသင်း အပေါ်တွင် သစ္စာ စောင့်သိရန်၊ အသင်း၏ ဂုဏ်သိက္ခာ လည်းကောင်း၊ နက္ခတ္ထ ဝေဒပညာ၏ ဂုဏ်သိက္ခာကို လည်းကောင်း နိမ့်ကျစေမည့် အပြုအမူ- လုပ်ဆောင် ခြင်းများ မပြုမူရန်။
(၂) နက္ခတ္တ ဝေဒ ပညာကို မိမိထက် တစ်နေ.၊ တစ်ရက်၊ တစ်မနက်၊ စောစီးစွာ လေ့လာ ထားသော- ပညာရှင် တို.အပေါ်တွင် လည်းကောင်း၊ ရှေးပညာရှင် များအား လည်းကောင်း၊ မရိုမသေ မထီမဲ့မြင် မပြုမူရန်။
(၃) မိမိအား ယုံကြည်၍ လာရောက် မေးမြန်းသော သူအပေါ်တွင် မည်သော အခါတွင်၊ မည်သည့် အကြောင်းနှင့် မှ- ဘေး အန္တရာယ် ဖြစ်စေအောင် ပြုမူ ဆောင်ရွက်ခြင်း မပြုရန်၊
(၄) မိမိအား လာရောက်မေးမြန်း သော ကိစ္စသည် အခြား တစ်ပါးသူ တစ်ဦးဦး၏ အရှက်၊ ဂုဏ် သိက္ခာ၊ ကိုယ်ကျင့် တရား၊ အသက်အန္တရယ် တို.အနက်- တစ်ခုခု တို.ကို ထိခိုက်စေ မည့် ကိစ္စမျိုးဖြစ်ပါက ထိုကိစ္စမျိုးကို မည်သည့် အကြောင်း နှင့် မျှ မဟောကြားရန်။
(၅) မည်သည့် အခါတွင်မှ- မိမိအား လာရောက် မေးမြန်းသူ အနေဖြင့် ကြောက်လန်. စေမည့် ပြင်းထန်သော ဟောဆိုချက်များကို မလိုအပ်ပဲ မဟောကြားရန်။ တစ်ဆက်တည်း မဖြစ်နိုင်သော မျှော်လင့်ချက် တို.ကိုပေး၍ လှည့်စားခြင်း မပြုရန်။
(၆) မေးမြန်းလာသူအား အမြဲတစေ လေးစားမှု ပြုပြီး- မိမိသည် အကြံပေး သည့် အနေ အထား တွင်ပင် ရပ်တည်၍ လိုအပ် သော ဆုံးဖြတ်ချက်ကို ကာယကံ ရှင်ကိုယ်တိုင်အား ဆုံးဖြတ် ခွင့်ပေးရန်။
(၇) မိမိအား ယုံကြည်၍ မေးမြန်းလာသူ၏ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ ကိစ္စများကို ကာယကံ ရှင်၏ ခွင့်ပြုချက် မရပဲ ထုတ်ဖော်ခြင်း မပြုရန်။
(၈) မိမိတတ်ကျွမ်းထား သော အဆင့်ထက် ကျော်လွန်သော အခက်အခဲ များ ပေါ်ပေါက် လာပါက- မိမိ ထက်ပို၍ ပညာ မြင့်မားသော ဆရာများ ထံသို. သွားရောက်ရန် ရိုးသားစွာ အကြံပြု ပေးရန်။
(၉) မိမိ၏ နက္ခတ္ထ ဝေဒ ပညာအားဖြင့် ရရှိလာသော ၀င်ငွေ အား- ဆင်းရဲ၊ နွမ်းပါးသူတို.၏ စားဝတ် နေရေး၊ ကလေးသူငယ်များ၏ ပညာရေးအတွက် မလွဲမသွေ လှူဒါန်းရန်။
(မှတ်ချက်- ဘာသာရေး ဆိုင်ရာ- လှူဒါန်းမှုသည် မိမိ သဘောအလျောက်သာ ဖြစ်သည်။)
(MOTAA အုပ်ချုပ်မှု ကော်မီတီ)
အထက်ပါ အချက် (၉) ချက်ကို လိုက်နာနိုင်မည် ဆိုပါက- MOTAA အသင်းသား အဖြစ် စာရင်းသွင်း ရန် ဤနေရာ ကို နှိပ်ပါ။
(လောလော ဆယ်အနေဖြင့် မိုးတား လက်ရှိအသင်းဝင်များမှ လွဲပြီး- နောက်ထပ် သင်တန်းသားသစ် များလက်မခံ သေးပါ။ အကယ်၍- နက္ခတ်ပညာ ရပ်ကို စစ်မှန်စွာ စိတ်ပါဝင်စားသူများ ရှိပါက- လက်ရှိ သင်တန်းသား တစ်ဦးဦး၏ မိတ်ဆက်စာ နှင့် အတူ- ဆရာ နျူမာန် (numan@motaa.net) ထံသို့ -မိမိအား ဆက်သွယ်ပေးသော လက်ရှိမိုးတား အသင်းဝင်၏ အမည်၊ ထိုသူ၏ မိုးတား အဖွဲ့ဝင် အမှတ်၊ မိမိ၏ ကိုယ်ရေး ကိုယ်တာ အချက်အလက်များ ပြည့်စုံစွာဖြင့် လျှောက်ထားရမည် ဖြစ်သည်။ )